Grass - Geofumadas
Systems Inkcazelo Geographic: videos zemfundo 30
I-geolocation yangaphakathi kwizinto zonke esizenzayo, usebenzisa izixhobo zecomputer, yenza ukuba i-GIS ikhankanywe ngokukhawuleza ukuyisebenzisa. Iminyaka eyi-30 edlulileyo, ukuthetha malunga nokulungelelaniswa, indlela okanye imephu kwakuyiyo ngxaki. Isetshenziswe kuphela ngabachwephengcali beemifanekiso okanye abatyeleli abangenakwenza ngaphandle ...
I-AutoCAD Imephu Bentley Systems cadastre ingca FreeCAD egeomates My
Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, Ukuprinta kokuqala
Ngaba kuluncedo ukufunda Java?
Beyond OpenOffice, Vuze, Woopra, okanye applet ukuba zenzeka kwezinye websites, ukuba ibekwe kakhulu kwiinkqubo iselula, TV, GPS,-ATM, iinkqubo zoshishino kunye ezininzi amaphepha abahamba yemihla ngemihla iyasebenza Java . Le tshati ilandelayo ibonisa indlela ubuchwepheshe Java abe domain onamandla ...
Abafundi bacinga ntoni nge-Open Source Geospatial
Eli nqaku isekelwe kwi-ntetho kwi FOSS4G Barcelona ngoSeptemba 2010 ngu: Iraklis Karampourniotis kunye Ioannis Paraschakis - Aristotle University of Thessaloniki Zoi Arvanitidou - University of the Aegean ikhonkco kum oko kwenzekayo Gabriel Reyes, kwaye kusekelwe kumbuzo, ukuba ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, qgis
Imixholo ye-118 evela kwi-FOSS4G 2010
Eyona nto ingasalayo kwezi ziganeko yile ntshumayelo yePDI ebonakalayo enokubakho kwiinkqubo zoqeqesho okanye ukwenza izigqibo; ngaphezulu kwezi zihlandlo ukuba umhlaba ovulekileyo wehlabathi we-geospatial ukhule ngendlela emangalisayo. Lo mzekelo omhle wobugcisa bomntu, ophinda abuyele kunye ...
Umhlaba ka-Google ingca GvSIG OS KML mapserver QGIS
ArcGIS-ESRI, Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, GvSIG, qgis, UDig
I-Geoinformatics 1: Ukujonga ukude
I-Geoinformatics ifika kwiphephancwadi yokuqala ye-2010, ngokugxininiswa okuphawulekayo kwiqondo elide. Nangona unyaka usemncinci, kubonakala ukuba iinguqu ezilandelayo ziya kugcina lo mgca, kubandakanye neli xesha zimbini zezona zikhulu zecandelo elingenanto i-ERDAS ne-ENVI. Ukuba izinto zifana ndicinga ngabo, kwilandelayo ...
ESRI ingca GvSIG OS Magazines
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Topography
Sisele sibheke kwezinye iincwadi ezivulelekileyo kumthombo we-GIS, kuquka iKgg kunye ne-gvSIG, ngaphandle kweenkqubo ezingezizo esizizame ngaphambili. Kule meko siza kuyenza nge-User-Friendly Desktop Internet kwi-GIS (iDig), enye yeza kwi-PortableGIS. Apho iDig ivela khona ukwakhiwa ...
kweentsuku ezimbalwa ezidlulileyo, bubushushu ngentonga yekofu eyenza umama wenza ezinye nemibono malunga 2010 kuphawulwa intsingiselo kwindawo Internet. Kwimeko yesimo sejospatial, le meko igxininisekile (ingathethi ukutyekisa), into eninzi sele ishiwo kwikota ephakathi ...
SEXTANTE, + i-220 imizila ye-gvSIG
Njengoko i-GRASS igcwalisa i-Quantum GIS, i-SEXTANTE yenzayo kunye ne-gvSIG, igcina i-specialty. Zizona zizame zentsebenziswano phakathi kwemithombo evulekileyo yomthombo kwiindawo ze-geospatial, ukwenzela ukuphepha ukuphindaphinda. Umgudu we-gvSIG ukuzigcina ulawulo lwe vector kunye namakhono amaninzi eCAD ...
ingca GvSIG OS
Sele isaziso isandulela oko kufuneka gvSIG yesihlanu inkomfa eya kubanjwa kwiziko weziganeko Valencia, i 2 4 ukuya 2009 Disemba. Uninzi umsebenzi oza kuboniswa uvela eSpeyin, nangona kukho amava aseJamani, e-Italy nakwalapho. Bambiza ...
Ukususela kwikota yokuqala ye2010, iFunivesithi yoQeqesho lweYunivesithi yaseFlorida iya kubakho iikhosi ze-GvSIG, eziye zafundiswa ukuza kuthi zizaliswe njengesihlomelo kwiDiploma ye-Interior Tourism Specialist. Ixesha leeyure ze-20 kwiiveki ezimbini, lijoliswe kwiingcali, ochwepheshe kunye namagosa anqwenela ukungena ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, GvSIG
Kuye ukhululwe uguqulelo eziphathekayo 2 GIS isicelo nje elimangalisayo ukubaleka yangaphandle drive, intonga USB kwaye nkqu iinkqubo digital eziyimfuneko ukuze ulawulo lolwazi lomhlaba kwi zombini desktop kunye webcam. Ubunzima bunjani? Ifayili yefakeli inzima i-467 MB, kodwa iyadingeka xa ...
gvSIG: iGajes yale nto kunye namanye amashishini
ukuvuthwa njani izixhobo ezamahala umdla, kwiminyaka embalwa eyadlulayo, ukuthetha malunga GIS simahla, kwaba ngathi Unix, Geek ilizwi kunye neqondo ukungathembani ngenxa yokoyika esingazaziyo. Yonke into eye yatshintshile kakhulu kunye neendlela ezahlukileyo zezicombululo eziye zakhula kungekuphela kokwakhiwa ...
Blog ingca GvSIG OS QGIS
Umzekelo ukulinganisa umgangatho we-Free Software
Olu xwebhu lwapapashwa kungekudala kwixesha elidlulileyo liSebe Iinkqubo kunye Systems kwiYunivesithi uSimon Bolivar kunye National Telecommunications Commission of Venezuela CONATEL, ndafunda oku ngokusebenzisa uthungelwano elo lizwe wabiza geomatics simahla kwaye ngenene yinto eyenza umdla ukuphefumlelwa njengendlela isibini ukuhambisa ...
Geospatial - GIS, GvSIG, ezintsha, qgis
Ngubani owasusa i-cheese?
Ndiyathanda Geoinformatics, ngaphandle kokuba yiphephancwadi enomdla kakhulu, ukuquletheka kakhulu kwiimeko ze-geospatial. Namhlanje uxwebhu lwe-Aprili luye lwaziswa, apho ndithathile khona itekisi eboniswe ebomvu ukuze ibakhuthaze ekufundeni okunomdla. Kwiinguqulelo zangaphambili ndenze uhlolo, namhlanje ndi ...
AutoDesk ESRI Umhlaba ka-Google ingca GvSIG OS Magazines GIS asibonise QGIS
Geospatial - GIS, GvSIG, IntelliCAD, GIS asibonise, Microstation-Bentley, egeomates My, qgis
Yintoni eya kuba kwiNgqungquthela ye-III ye-GIS yamahhala
I-III Free GIS Nkomfa iza kuqhubeka Girona le 11, 12 kunye neentsuku 13 2009 Matshi, kungekudala emva kokuba 2009 Computer Fair of Havana. NgoLwesihlanu i-13 iya kubakho iindibano zocweyo ezixeshanye, ezintathu ngentambama kunye nemithathu ntambama ehlelwe ngolu hlobo lulandelayo: I-Workshop yaseMsombuluko ...
Iimpawu zokukhetha iisombululo zeGIS / CAD
Namhlanje kuye kwaba ngumhla endibhalileyo ukuba ndibonise kwiklasi ye-cadastre ye-estate estate yaseBolivia. Esi sifundo sijoliswe ekuboniseni indlela yokukhetha iteknoloji yecomputer. Lo ngumfanekiso owenziweyo, kwaye ingqalelo yam ukuhlalutya kwimeko esithemba ngayo ...
ArcView I-AutoCAD Imephu AutoDesk 3D civil ESRI ingca GvSIG OS GIS asibonise
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, GvSIG, IntelliCAD, GIS asibonise, Microstation-Bentley
Ukulandwa okuxabisekileyo kwabasebenzisi be-GIS
Nolu uluhlu lokulandwayo oludla kakhulu luncedo kubasebenzisi bee-CAD / GIS. Ezinye zazo azifumaneki kwiinguqulelo zakutshanje, kodwa zisengqinisiso kwaye kuyafaneleka ukugcina iliso ekuhlaziyeni kwazo. I-Autodesk DWF Viewer Free ithuluzi lokufunda nokushicilela iifayile ze-AutoCAD ...
ArcView AutoDesk ESRI ingca
Page 1 Page 2 kwiphepha elilandelayo